कसरी काट्ने र फास्टन कम्पोजिट डेकिten
माथिल्लो तस्विरले देखाइएको जस्तै तपाईको क्षेत्र पनि यस्तै छ, यो अनियमित हो र तपाई यसलाई विशिष्ट शैलीका साथ डिजाइन गर्न चाहानुहुन्छ। तर डब्ल्यूपीसी डेकिंग कारखानाले तपाईलाई भनेको थियो कि उनीहरूले केवल एक वा दुई आकार र लम्बाई उत्पादन गर्दछन्। जब तपाईले सुन्नुहुन्छ। यी, तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ ...
WPC को बारेमा केहि सुझावहरू
२१-०7-०6 मा व्यवस्थापक द्वारा
काठ प्लास्टिक कम्पोजिट (डब्ल्यूपीसी) उत्पादनहरूले दुबै काठ र पोलीमर सामग्रीका फाइदाहरूको मजा लिन्छन्, तर यो उनीहरूको कमीबाट मुक्त हुन्छ। डब्ल्यूपीसी सामग्री उच्च शक्ति हो, सड्नबाट बचाउँछ, मौसम प्रतिरोध, स्लिप प्रतिरोध। यो परिदृश्य, बागवानी, विलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अन्य बाहिरी प्लेटफार्म। यति मानिस ...
डब्ल्यूपीसी डेकिंग काठको प्लास्टिक र कम्पोजिट डेकिंगका लागि छोटो छ, यो विश्वभरि नै लोकप्रिय छ। जब हामी कम्पोजिट डेकिंग वर्णन गर्दछौं, हामी सधैं भन्छौं डब्ल्यूपीसी डेकिंग कुनै पेंटिंग, कुनै गोंद, कम मर्मतसम्भार छैन। तब हुनसक्छ कसैले यसलाई भ्रममा पार्नेछ। के डब्ल्यूपीसी डेकिंग बोर्ड रंग्न सकिन्छ? यदि सक्नुहुन्छ भने, कसरी टी ...
WPC decking सफा र रखरखाव
पारंपरिक हार्डवुड फ्लोर over भन्दा डब्ल्यूपीसी डेकिंगका धेरै फाइदाहरू छन् र अब यो झन् झन् लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। तर कुनै कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी डेकिंग १००% मर्मत-सम्भारमुक्त छ। जब प्रयोगमा छ, सेवा जीवन विस्तार गर्न यसलाई अझै धेरै नियमित रखरखाव चाहिन्छ, तर मर्मतसम्भार साधारण छ। साथै दागहरु ...
WPC वाल क्लाडिंग को स्थापना गाइड
WPC काठ ​​प्लास्टिक र कम्पोजिटको छोटो छ, यो मौसम प्रतिरोध, जलरोधक, कीट रोकथाम र कम रखरखाव। यति धेरै राम्रो क्षमताको कारण, अधिक र अधिक मानिसहरूले WPC भित्ता प्यानल छनौट गर्न सक्दछन् उनीहरूको भित्ता सजावटको लागि। त्यसोभए केहि ग्राहकहरु स्थापना को बारे मा भ्रमित हुनेछ, इन्स्ट साथ ...
WPC Decking कसरी स्थापना गर्ने?
डब्ल्यूपीसी डेकिंगले दुबै काठ र पोलीमर सामग्रीका फाइदाहरू पाउँदछन्, तर उनीहरूको कमीबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण कम्पोजिट डेकिंग विश्वभर लोकप्रिय छ। तपाई स्थापनाको बारेमा चिन्ता लिनुहुन्छ, यसको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। वुड प्लास्टिक कम्पोजिट डेकिंग हो। स्थापना गर्न सजिलो ...
Co-extrusion, काठ कम्पोजिट दायरामा पछिल्लो टेक्नोलोजी, यस उन्नत क्याप टेक्नोलोजी कोरमा सह extruded छ, यसको क्याप गरिएको सतह सामग्रीले प्रत्येक बोर्डलाई अद्वितीय र उत्कृष्ट प्रदर्शन दिन्छ। क्यापको इन्सुलेटिंग गुणहरूले सह-एक्सट्रूजन बोर्डलाई अत्यन्त स्थिर बनाउँदछ, सतह विस्तार हुँदैन र ...
WPC काठ ​​प्लास्टिक कम्पोजिटको छोटो छ, मुख्य सामग्री पीई र काठ फाइबर हो। यसको भव्य, यथार्थवादी aesthe ...
डब्ल्यूपीसी कम्पोजिट डेकिंग, आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग, WPC फर्श, WPC आउटडोर डेकिंग, काठ प्लास्टिक कम्पोजिट डेकिंग, WPC सजावट भुइँ,